गेस्ट हाउस "वैलेन्टिन" (Gelendzhik, नीलो खाडी): ठेगाना, विवरण, समीक्षा
सबैभन्दा रमाइलो छुट्टी हामी सबैभन्दा लागि - यो समुद्र यात्रा केवल समुद्र छ, र, तर घाम मनपर्ने काकेशस मा। सबैलाई छुट्टी सफल थियो, त्यो एक लामो समय को लागि सम्झना छ चाहन्छ। क्यामेरामा धेरै स्मरणीय चित्र, एक अद्भुत छुट्टी को reminiscent रहिरहन्छ।
"वैलेन्टिन" गेस्ट हाउस। सुरम्य स्थान
जहाँ काला सागर तट जाने छ? विकल्पहरू को ठूलो, र यो विविधता बीच कोमल, न्यानो समुद्रको किनारमा एक सुन्दर स्थान छुट्याउन सक्नुहुन्छ - "। प्रणय" एक गेस्ट हाउस यो आरामदायक, साना Gelendzhik भनिन्छ शहर, र थप विशेष को किनारा मा स्थित छ - ब्लू खाडी मा। यो शहर को एउटा सानो, रिमोट क्षेत्र छ। किनभने यसले रूखहरू भन्दा माथि शाब्दिक बादल पुग्नेछ जहाँ, र ताजा हावा बाट रिङ्गटा महसुस गर्न सुरु जंगल, घेरिएको छ निलो खाडी निश्चित मा छुट्टी, सबैलाई सम्झना गर्न। समुद्र स्पष्ट छ, तपाईं माछा, हेर्न सक्नुहुन्छ अलग अलग रंग गोले सङ्कलन, पेबल्स। यहाँ यो आश्चर्यजनक स्थानमा, तपाईंले आफ्नो छुट्टी, रूमानी नाम "प्रणय" एउटा गेस्ट हाउस मा बसे खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
छुट्टी अतिथि एकदम उचित मूल्य प्रदान गर्दछ। "प्रणय" सान्त्वना, उत्कृष्ट सेवा, एक घर, एक साँच्चै घनिष्ठ वातावरण Blends। त्यहाँ फिक्री र व्यस्त लागि कुनै ठाउँ छ, तर त्यसको विपरीत, तपाईं शहर बाहिर हेर्दै छैन, मिसिन को गर्जन सुन्न, शान्ति, मौन एक अर्थमा आनन्द उठाउन सक्छौं छैन। बाट गेस्ट हाउस मात्र केही 500 मीटर समुद्रलाई। समुद्र तट पर्यटकहरु आवश्यकता को मामला मा नि: शुल्क शटल बस हुनेछ।
गेस्ट हाउस को स्थान। यसलाई कसरी पुग्न
गेस्ट हाउस "प्रणय" (Gelendzhik) प्राप्त गर्न सक्छौं? घर नम्बर 14 कार यात्रा गर्न एक यात्रा कार्ड खरीद गर्न सक्नुहुन्छ रुचि गर्नेहरूले शिक्षाविद् Shirshov सडक,: यो शानदार रूपमा निम्नानुसार स्थान को ठेगाना।
र अब गर्ने आइपुग्दा ती लागि जानकारी साझेदारी:
विमान। उहाँले Gelendzhik वा Anapa र क्रास्नोडार, घाम वा मुलुकमा। त्यहाँ पर्यटकहरु एउटा ट्याक्सी समातेर वा आफ्नो आगमन को होटल चेतावनी गर्न, यो पक्कै पनि स्वागत गरिनेछ।
रेल। उहाँले शहर को स्टेशन मा आएको Anapa, नोवोरोसीस्क को र क्रास्नोडार शहर। त्यहाँ तपाईंले, वा अतिथि घर कार, बस जान सक्नुहुन्छ।
बस। उहाँले नै शहर को बस स्टेशनमा आएको। त्यहाँ पनि बस वा ट्याक्सी द्वारा पुग्न सकिन्छ।
"प्रणय" गेस्ट हाउस को सुविधाहरू
दुई र तीन स्टोर - आरामदायक होटल तीन भवन हुन्छन्। सबै क्षेत्र पूर्ण एक पैदल संग, अतिथि सुन्दर फूल र रूखहरू, ध्यान मालिक द्वारा लगाए द्वारा पारित गर्न सक्षम हुने छैन,-राम्रो groomed छ टाइल छापिएको।
कुल गेस्ट हाउस "प्रणय" (Gelendzhik, नीलो खाडी) 24 कोठा छन्। प्रत्येक अतिथि आफ्नो स्वाद केही चयन गर्न मौका छ।
, сплит–систему, а также с персональную ванную и туалетную комнату. को कोठा प्रत्येक एक सुन्दर नरम सामान, एक केबल विभाजित प्रणाली, साथै व्यक्तिगत बाथरूम र शौचालय कोठा संग छ। कोठा मा फ्रिज पनि उपलब्ध छ।
नियमित कोठा सफाई लिन्छ ठाउँ र ओछ्यान तन्ना, तर केवल ग्राहक संग परामर्श मा। पूर्व व्यवस्था बिना कुनै एक कोठा प्रवेश गर्छ।
इच्छित भने, तपाईं कारण तह कुर्सियों केही अतिरिक्त बेड सोफा बेड आउन गर्न सक्नुहुन्छ।
सुहागरात मा गेस्ट हाउस "प्रणय" (Gelendzhik) आए गर्नेहरूका लागि, त्यहाँ विशेष लक्जरी अपार्टमेन्ट छन्। यी उच्च सान्त्वना क्षेत्र संग सुइट्स छन्। फ्रिज मा शैम्पेन को एक बोतल - कोठा एक डबल बेड र होटल देखि एक सानो उपहार प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ घर मा कार को लागि एक गार्ड सहित, मुक्त पार्किङ छ।
अतिथिहरूको एक नाममात्र शुल्क (200 rubles) को लागि भान्सा स्वादिष्ट नाश्ता आफूलाई आनन्द उठाउन सक्छौं।
होटल घर नजिकै पूर्वाधार
एक पैदल वा यात्रा गर्ने यात्री लागि कहाँ जाने सक्नुहुन्छ?
जहाँ त्यहाँ सधैं धेरै मजा छ शहर केन्द्र, एक पन्ध्र मिनेट ड्राइव मा। यो क्याफे, रेस्टुरेन्ट, आकर्षण, सडक चाडहरूमा, discos, क्लबहरू।
पनि नजिकको विचरण र बच्चाहरु को लागि मनोरञ्जन केन्द्र हो। -эффектом. Malyshni3डी-प्रभाव संग कार्टून कम गर्न, टाइपराइटरमा, roundabouts को मा चल्न सक्छ।
तिनीहरूले पानी पार्क नजिकै बसे। हो, दुई धेरै रूपमा। यो "Behemoth" र "स्वर्ण खाडी"। हामी पर्यटक सम्झना छ छैन भन्ने निश्चय साथ भन्न सकिन्छ।
नजिकै गेस्ट हाउस जहाँ त्यहाँ सधैं ताजा फलफूल र तरकारी खरिद गर्न मौका छ बजार, त्यहाँ छ।
बस स्टप vacationers सिर्फ एक मिनेट हिंड्न छ। हावा संग बस शहर मा कहीं 15 मिनेट लाग्नेछ।
थप सेवाहरू Guesthouse
पहिले नै उल्लेख रूपमा, होटल एक शटल सेवा छ, तर यो भुक्तानी।
200 rubles को लागि vacationers यो लुगा धुने मेसिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सेवा क्षेत्र मुक्त गर्न समावेश:
- Fi . वाई -।
BBQ र बारबेक्यू को।
हरियो Meadow र स्यान्डबक्स।
होटल Gelendzhik रोचक ठाउँ र आसपास सहर गर्न यात्राहरु को एक किसिम प्रदान गर्दछ।
गेस्ट हाउस "वैलेन्टिन" (Gelendzhik): समीक्षा
पर्यटकहरूले गेस्ट हाउस एक उच्च स्तर मा ग्राहकहरु, उत्कृष्ट सेवा र सेवामा एक उत्कृष्ट मनोवृत्ति संग प्रसन्न तुल्याउने याद गर्नुहोस्। समुद्र सधैं सफा र धेरै न्यानो छ।
को कमियां लागि, केही अतिथिहरूको कि समुद्र तट गर्न पैदल केही टाढा तथ्यलाई गनगन, तर यो भव्य दृश्यहरु मिलेका छोटो यात्रा हो।
धेरै पर्यटकहरु बिन्दु खुसी चाहेको यदि तिनीहरूले स्टेशन मा पूरा गर्न सक्छन् भनेर हो। पनि राति बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्त आगमन मा, अनुकूल कर्मचारी गेट, गेट गर्न कुञ्जीहरू माथि नम्बर, बस हात धारण। होटल को कोठा शुद्धता खुसी छन्। भव्य स्विमिंग पूल, खेल मैदान, हरियो, blooming गल्ली: धेरै कि सुन्दर दृश्य प्रस्तुत भन्छन्। तपाईं कहाँ खान सक्नुहुन्छ गजेबो, शानदार सुसज्जित, र भान्सा बस भव्य छ।
सबै कर्मचारी, मैत्री विनम्र छन्। निलो खाडी मा छुट्टी (गेस्ट हाउस "वैलेन्टिन") तर्फ मात्र सकारात्मक सम्झनाहरु राख्छ। धेरै पर्यटकहरु तिनीहरूले अर्को वर्ष फेरि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भन्छन्।
निश्चित गेस्ट हाउस "प्रणय" (Gelendzhik), पर्यटक सबै समस्या बारे भूल सक्षम र सान्त्वना एक संसारमा प्रवेश कहाँ रहन आउन हुन!
होटल "कन्टिनेन्टल", बेल्गोरड: तस्बिर र समीक्षा
होटल स्वर्ण पोर्ट Salou एसपीए4* (Salou, स्पेन) फोटो र समीक्षा
Dysmenorrhea: लक्षण, उपचार, परिणाम र प्रकारका
रसद: को, अमेरिकी युरोपेली र जापानी सिस्टम के हो?
"Medsviss" Lenivke मा: समीक्षा
होटल Ramada स्वतन्त्रता Resort होटल (टुनिशिया, Monastir): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
Viktor Bortsov: "गरौं गहिरो bonjour मा स्थिर"
जेके-फ्लिप-फ्लप। सञ्चालन, funtsktsionalnye सर्किट सत्य तालिका सिद्धान्त
कसरी सौर्य प्रणाली को एक मोडेल बनाउन दुई विकल्प
प्रिज्म को आधार को क्षेत्र: देखि त्रिकोण देखि बहुभुज